छैटौं राष्ट्रिय प्रतियोगिता अर्न्तगत देवी चौधरी र सविता चौधरी राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गर्न सफल | Himalaya Television
Himalaya Television / खेलकूद / छैटौं राष्ट्रिय प्रतियोगिता अर्न्तगत देवी चौधरी र सविता चौधरी राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गर्न सफल	छैटौं राष्ट्रिय प्रतियोगिता अर्न्तगत देवी चौधरी र सविता चौधरी राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गर्न सफल
Written by admin. Posted in खेलकूद
Published on February 27, 2012 with छैटौं राष्ट्रिय प्रतियोगिता अर्न्तगत भारोत्तलनतर्फ नेपाल पुलीसकी देवी चौधरी र हडर्ल्सतर्फ सविता चौधरीले नयां राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गरेका छन्। कञ्चनपुरमा भएको भारोत्तोलनको खेल अर्न्तगत ५३ केजी तौलसमुहमा नेपाल पुलीसकी देवी चौधरीले पाचौं राष्ट्रिय खेलकुदमा क्लिन एण्ड जर्कमा बनाएको राष्ट्रिय कीर्तिमानलाई भंग गर्न सफल भइन्। चौधरीले यसअघि क्लिन एण्डजर्कमा ७५ केजीको रेकर्डलाई भंग गर्दै ७६ केजी उचाल्दै नयां रेकर्ड बनाइन्। कुल १ सय ३१ केजी उचालेपछि चौधरीले सो स्पर्धामा स्वर्ण हात पारिन्।
सोही स्पर्धामा निता थापाले रजतपदक हात पारिन्। ४८ केजी तौल समूहमा पुर्वाञ्चलकी कविता चौधरीले कुल एक सय ३ केजी तौल उचाल्दै स्वर्णपदक हात पारिन्। त्यस्तै, १०० मिटर हर्डर्ल्स तर्फको रेसमा एपिएफकी सविता चौधरीले २५ बर्षपछि मायादविको नाममा रहेको राष्ट्रिय कीर्तिमान तोड्दै नयां कीर्तिमान बनाएकी छिन। कविताले निर्धारित दूरी १७ दशमलव ५० सेकेण्डमा पुरा गर्दै स्वर्णपदक हात पारिन्। त्यस्तै ब्याटमिन्टनको टिम इभेन्टमा महिला र पुरुष तर्फको खेलमा एपिएफले बाजी मारेको छ। महिलातर्फ पश्चिमाञ्चललाई दुई शुन्यको सेटमा पराजित गर्दै एपिएफले स्वर्णपदक हात पार्‍यो भने पुरुषतर्फ नेपाल पुलीसलाई तीन एकको सेटमा हराउदै स्वर्णपदक जित्यो।
उता, कञ्चनपुरमा भएको क्रिकेट खेलमा एपिएफ क्लवले मध्यपश्चिमाञ्चललाई एक सय ७३ रनले पराजित गर्दै विजयी सुरुवात गरेको छ। मध्यमाञ्चलका सैलेश राणाले आज भएको पौडीमा २०० मिटर ब्यक्तिगत मिड्ले तर्फ २ मिनेट ३१ सेकेण्ड ८७ पल्समा निर्धारीत दूरी पार गर्दै नयां कीर्तिमान बनाएका हुन। राणाले सन २००९मा आफैले बनाएको दुई मिनेट ३१ सेकेण्ड ९४ पल्सको रेकर्डलाई भंग गर्दै नया रेकर्ड बनाएका हुन।
उता, धनगढीमा भएको एथलेटिक्स्तर्फको खेलमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका खेलाडीहरुले वर्चश्व जमाएका छन्। धनगढीमा भएको खेलमा नेपाल प्रहरीका भूमीराज राई र विकास देसारलाई पछि पार्दै सशस्त्रका अर्र्जुन ढकालले १० हजार मिटरमा स्वर्ण पदक हात पारे। उता, हाइजम्पतर्फ भने नेपाल प्रहरीकी केशरी चौधरीले स्वर्ण पदक हात पारिन्। उनले १ दशमलव ४३ मिटर जम्प गर्दै पहिलो स्वर्ण पदक हात पारेकी हुन्। पश्चिमान्चलकी प्रभा चौधरी दोस्रो र सशस्त्रकी शीला चौधरी तेस्रो भइन्। आजै भएको १५ सय मिटर दौडको पुरुषतर्फको खेलमा नेपाल पुलिसका सिद्धान्त अधिकारीले स्वर्ण पदक हात पारे।
उनले ४ मिनेट शून्य नौ सेकेन्डमा दूरी पूरा गरेका थए। दोस्रो स्थानमा रहेका सशस्त्रका प्रहरीका लक्ष्मण मल्ल ठकुरीले ४ मिनेट १४ दशमलव २० सेकेन्डमा दूरी पूरा गरे। सशस्त्रका आशनारायण चौधरीले ४ मिनेट १६दशमलव ६० सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पार गर्दै तेस्रो भए । महिलातर्फको खेलमा भने सशस्त्र प्रहरीकी विन्द्रा श्रेष्ठले स्वर्ण पदक जितिन्। उनले निर्धारित दूरी ५ मिनेट शून्य पांच सकेण्डमा पूरा गरेकी थिइन्।
पश्चिमान्चलकी लक्ष्मी पान्डेले ५ मिनेट नौ सेकेन्डमा दूरी पूरा गरेर रजत पदक जितिन्। सशस्त्र प्रहरीकी गीता खत्रीले कास्य पदकमा चित्त बुझाइन्। ह्याण्डबलमा पश्चिमान्चलले पूर्वाञ्चललाई पाखा लगायो भने कपर्दीमा आयोजक सुदूरपश्चिममले पूर्वान्चललाई २४ का विरुद्ध ५० स्कोरले पराजित गर्‍यो। यसैगरी, अहिले धनगढीमा कपर्दी, करांते, ब्याडमिन्टन, भलिबल, बक्सिङ, बँस्केटबल, ह्या48ड बल फुटबल लगायतका खेलहरु भइरहेका छन्।
There are currently no comments on छैटौं राष्ट्रिय प्रतियोगिता अर्न्तगत देवी चौधरी र सविता चौधरी राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गर्न सफल. Perhaps you would like to add one of your own?